Groomloge, Astro 3D uye mamwe maapplication uye mitambo yemahara kana pakutengesa Izvozvi !! | IPhone nhau
Groomloge, Astro 3D uye mamwe maapplication uye mitambo yemahara kana pakutengesa Izvozvi !!
Kubva IPhone nhau Isu tinopemberera iyo yakasarudzika mhemberero yeSantiago munzira yakanakisa matinoziva maitirwo ayo, tichikuzivisa iwe nezve kunyorera nemitambo yemahara kana nezvikosha zvakakosha zvaungawana izvozvi kuti uwane zvakanakisa kubva pa iPhone yako kana iPad kana, zvakapusa, kushandisa nguva inovaraidza zvikuru kupukunyuka kubva kuzvinhu zvemazuva ese.
Nhasi tinokuunzira sarudzo inonakidza yemapurogiramu nemitambo yemahara kana pakutengesa asi yeuka kuti kukwidziridzwa kwese kuchave kuri kushanda Nguva Yakatemwa. Kubva IPhone nhau Tinogona kungovimbisa kuti ndezvechokwadi panguva yekuburitsa ichi posvo, zvisinei, zvinosuruvarisa, hatizive kuti zvinopera riini nekuti muzviitiko zvakawanda, ndivo vavaki vacho pachavo vasingape ruzivo urwu. Saka, kana iwe uchifarira chero anotevera mitambo kana kunyorera, tuye isu tinokukurudzira kuti uzvirwire nekukurumidza sezvazvinogona kuti ugone kubatsirwa kubva pakutapudza.
3 Astro 3D: Tarisa Constellation, Nyeredzi & Satellite
Isu tinotanga yedu sarudzo yeChipiri inopa ne Gloomlogue, application yekugadzirisa foto ine hunyanzvi ndeyekuti iwe unogona chinja mafoto ako kuve akanaka uye anoyevedza kupenda uye mifananidzo. Nechinangwa ichi, ine yakachena kwazvo uye inonzwisisika mushandisi interface, iyo inoita kuti kushandiswa kwayo kuve nyore, uye inosanganisa akawanda akasimba ekugadzirisa maturusi kuitira kuti iwe ugone kupa ako mafoto chitarisiko chaunoda mumasekondi mashoma.
Kupenya-kupenya kupenya, musiyano, kuzadza, kuburitsa, kupinza, vignette, mimvuri, tembiricha, tint, hue, blur ...
Nyorera chero e50 mafirita-akafuridzirwa mafirita.
Ita shanduko yekugadzirisa otomatiki
Wedzera zvinyorwa uye mafuremu
Gadzira mifananidzo pamifananidzo
Isa makumi maviri nemasere mafirita
Sarudza kubva pamakumi mashanu negirazi mhedzisiro kana 52 bokeh
Gloomlogue Iine mutengo wenguva dzose we1,09 euros asi kana ukamhanyisa unogona kuiwana mahara.
Kuputira ndechimwe Photo mupepeti weIOS iyo yaunogona nayo tenderera, kutambanudza, kukotamisa kana kugadzirisa mapikicha ako kuwedzera maumbirwo nekungoshandisa minwe yako. Kune mamirioni emusanganiswa wakasiyana nekuti iwe unogona zvakare kuisa chero yeiyo 21 mafirita zvaisanganisira, 31 yakakosha mhedzisiro kugadzira mifananidzo yakasarudzika, gadzirisa mwenje, ruvara kana mumvuri, wedzera mafuremu, uye nezvimwe. Uye zvese izvi pasina kukanganwa iyo kusvibiswa, iyo sarudzo yekuchengetedza zvisikwa zvako mukugadzirisa kukuru kana kugovana nekukurumidza paTwitter, Facebook kana kungo chengeta muApp Photos.
Kuputira Iine mutengo wenguva dzose we1,09 euros asi kana ukamhanyisa unogona kuiwana mahara.
Astro 3D: Tarisa Constellation, Nyeredzi & Satellite
"Astro 3D" ishandisirwo inoshamisa ye iPhone nePadad iyo yaungatsanangure nayo denga kuti udzidze zvakawanda pamusoro penyeredzi, mapuraneti, mapoka enyeredzi, nebulae uye zvese zvinoonekwa kubva munzvimbo nenzvimbo kwaunenge uri.
Astro 3D inoshandisa kambasi kugadzirisa mepu chaizvo uye inokuratidza Ruzivo rwakadzama rweinopfuura zviuru gumi nezvishanu nyeredzi: daro repasi, kutarisisa, dhayamita, saizi uye zvimwe zvakawanda.
Pasina kupokana, Astro 3D chishandiso chakanakisa kunakirwa pahusiku hwezhizha uhwo mutengo wakajairika uri 2,29 euros asi kuti iwe unogona ikozvino kuwana chete ye1,09 euros kwenguva shoma.
Astro 3D1,99 €
"OTTTD" is zano uye zano mutambo nezvakawanda zvekuita uye zvisingaite giraidhi mauri uchafanirwa kuvaka zvidziviriro, kuongorora zvisina kujairika nyika uye kutarisana nevavengi vako mune zvisingaite kurwa uye hondo. Simudza uye iwe unogona kuvhura zvinowedzera zvinoparadza uye zvisingaite zvombo
"OTTTD" ine mutengo unowanzoitika we6,99 euros asi ikozvino unogona kuiwana chete 3,49 € kwenguva yakati rebei.
Pic Navi Ndicho nzvimbo dzemifananidzo izvo zvinokutendera iwe kuti uzive uye usvike kunzvimbo iyo pikicha yakatorwa. Ichawana iyo pikicha iri mubvunzo pamepu uye inokupa iwe nzira yekuenda kunzvimbo iyoyo netsoka, nebhasikoro, nemotokari kubva kunzvimbo yauri ikozvino.
Iwe unogona zvakare wedzera kero kumifananidzo isina ruzivo rweGPS, kana bvisa ruzivo rweGPS kuchengetedza zvakavanzika zvako.
Pic Navi Iine mutengo wenguva dzose we3,49 euros asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Groomloge, Astro 3D uye mamwe maapplication uye mitambo yemahara kana pakutengesa Izvozvi !!
Kupfuura zana shanduko pakati pe beta 100 uye beta 3 ye iOS 4
Cabify yakagadziridzwa uye ikozvino ichatikumbira isu iyo DNI kukumbira mutyairi